Dastabej » हिंसापीडित अम्बिकाको ब्याथाः चौरहामा बेलाएर जेठाजुले सरीयाको रडले कुटीरहे
हिंसापीडित अम्बिकाको ब्याथाः चौरहामा बेलाएर जेठाजुले सरीयाको रडले कुटीरहे – Dastabej
न्याय नपाएको गुनासो, उपचारमा ८० हजार, क्षतिपुर्ति १० हजार
मेरो नाम अम्बिकाकुमारी चौधरी हो । मेरो माईती घर बाँसगढी नगरपालिका वडा न ५ मोतिपुर गाउँमा पर्छ । बिहेपछि मेरो हालको घर बाँसगढी नगरपालिका ककौरा गाउँमा बस्छु । मेरो श्रीमान मिलन चौधरी६ वर्षदेखि बैदेशीक रोजगारीका लागि बिदेश हुुनुहुन्छ । जेठो ब्रहमा चौधरी जो गाउँको बडघर हुनुहुन्छ । दाजुभाई छुटिएकाले सासुससुरा पनि अलग बस्नु भएको छ । बैशाख महिनामा मलेसीयाबाट मेरो श्रीमानको फोन आयो । उहाँले बुबाआमाको खबर सोध्नु भो । मैले सबै राम्रो छ भने । अनि बर्षा सुरु हुने बेला भएकाले सासुससुराको घर बनाउन पाए पानी पर्दा पनि अरामले बस्न पाउँनु हुन्छ भने । उहाँले दाईलाई फोन गरेर घर बनाउँन भन्छु भन्नु भयो । मैले पनि हुन्छ भनेर फोन राखे । श्रीमानले आफ्ना दाई ब्रहमालाई फोन गरेर भन्नु भो सायद, बुबाआमाका लागि अलि बस्न मिल्ने छाप्रोको घर किन नबनाई दिएको ? मैले कति पैसा सहयोग गर्नपर्छ भन भन्नु भो । श्रीमान मिलनले जेठाजु ब्रहमालाई फोन के गर्नु भो उहाँ त रिसले आगो भइहाल्नु भो । उ महिला जहिले नी भाईलाई फोन गरेर मेरो बारेमा चुक्ली मात्रै लगाउँछ भनेर गाली गर्नुभयो ।
बैशाख ७ गतेका दिन हो । म साथीको घरमा गएको थिएँ । जेठाजुले मलाई फोन गर्नु भो र गालीगलौज गर्दै छिटो आईज भनेर बोलाउनु भो । मलाई साह्रै डर लागिरहेको थियो । किनभने उहाँ निकै म संग निकै रिसाउँनु भएको थियो । मैले साथीलाई त्यो कुरा सुनाए । उनले त्यसो भए नजाउ भन्नु भो । मैले केही पनि गल्ती गरेको छैन किन डराउनु भने । त्यहाँबाट घर फर्केर आएँ । निकै गर्मी थियो त्यसैले घरमै अराम गरेर बसेको थिए । नभन्दै घरमा चौकीदार आईपुग्नु भो । र, ब्रहमा बडघरले बोलाउनु भाको छ, छिटो हिड्नुस भन्नु भो । म एक छिनमा आउँछु जवाफ फर्काए । चौकीदार त्यहाँबाट जानु भो । एक छिनमै फेरी घरमा आएर छिटो हिड्नुस भन्नु भो । मलाई त्यहाँ जान कर लाग्यो । गर्मीमा हिडेरै जेठाजुले बोलाएको ठाउँमा पुगेँ । उहाँ सरीयाको रड लिएर बस्नु भएको रहेछ । तँ मसंग किन जहिले नी निउँ खोज्छस ? किन चुुक्ली लगाउँछस ? मेरो पछि किन लागेको यति धेरै । साले तलाई म सिध्याउँछु भन्दै रडले मेरो शरीरभरी प्रहार गर्नु भो । म रोई रहँे । ब्रहमा बडघर भएका कारणले त्यहाँ रहेका गाउँका कोही बोल्न सकेनन् । चौकीदार र अन्य बडघरहरुले पनि मलाई बचाउँन चाहेनन् । उनले एकहोरो सरीयाले हिर्काइ रह्े । म बेहोस भए छुँ । त्यसपछि मलाई अस्पताल भर्ना गरियो । करिव एक महिनासम्मको उपचारले म ठिक भएकी छुँ । उपचारमा ८० हजार जति खर्च भयो । अझै पनि शरीर दुख्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा मेरो चा्ेट ठिक भयो तर मनमा लागेको चोट कहिले निको हुने हो कुन्नि ? अझ ब्रहमाले मलाई धम्काएको शब्ढ बिर्सिनै सक्दैन, तलाई एक दिन काटछु र जेल जान्छु । असुरक्षाका कारण हाल घरमा बस्न नसकेर म माईतीमा बसेको छु । मेरो सहयोग गर्नुस । अम्बिकासंगको कुराकानीमा आधारित ।
सरीयाको रडले कुटपीटपछि अम्बिकाको शरीरमा लागेको डाम . तस्बिरः अम्बिकाकुमारी
अम्बिकाले दस्ताबेजलाई थारु भाषामा पठाएको एसएमएस
Baisakh7gate ghatna ho.Mai ghauma sanghariyak ghar gil rahu to mahin mor sanghariyak than barhamma phone kaike main balail to mor sanghariya kahli jau balaita gariyath ki marath.To mai kahnu mai Kux nai kahle hu to ka j gariyai aatra kahke mai ghau manse aai ginu. Ghare aainu to chauki dar mahin balai aai nai to mai kahnu bara gham manse aail batu to bisa liu tuh jau abai mai jim.Mai nai ja painu bas fer chauki dar balai aai gil to mai kahnu mahin ber ber ka K balaito mai okar ghar nai jitho to ka j balaito mahin marek tan balaito ki gariyaik balaito bas chauki dar kahal hamre bati Kux nai hui chalo kahke kahal
O rahai puran barghar kahna jagram tharu o lawa barghar bisnu Prasad tharu chauki dar kahna mangara tharu o Mor sasurwa kahna thagga tharu o dethwa mahin pirate ba taun barka jethwa ho barhamma parsad tharu o mane barka jethiniya Radhika tharu o maila jethwa bisnu tharu o maghli jethiniya Rabina tharu aatra jane rahai mahin pite baji. Bas mai fer nai ginu to fer chauki dar balai aail to mai kahnu nego abai mai aaitu aatra kahnu bas mai toilet chal ginu bas fer chauki dar balai aail to mai kahnu mai jaitu tuhran K sassa nai huitho kahat to batu aaitu kahke bas mai barhammak ghar ginu.To uha pugnu to barhamma burhiya kahal aail to u kahal ha aail ba.Barka jethiniya kahal mahin tai chugli ka K khaithe to mai kahnu K kar than bas barhamma kahal malesiya to mai kahnu mai chugli nai khaile hu.Bas mai kahnu bihan K hamar nanik papa apan babak number maga tahai to mai nai dehnu kah nai mor than ba babak number ab ukre xawa dai ka ka bat kar nai mahin nai pata ho aatra kahnu bas yak kasi uth K mahin pite lagal. Hamar nanik papa apan dai baban K ghar banaik lag kahnai apan dadan to uhe ris mahin pital chugli khaithe kahk. barhamma mahin mar K sekal to kahle ba mai ehin yak na yak din Kat K jehal jim
ईलाका प्रहरी कार्यालय, मोतिपुरको भनाई
उक्त घटनापछि अम्बिकाले ईलाका प्रहरी कार्यालय मातिपुरमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिईन । उनलाई राम्रोसंग कानुनी सहयोग र परामर्श नदिएका कारण ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता नभएर सार्वजनिक अपराध मुद्दा ब्रहमामाथि दर्ता भएको थियो । उनलाई पक्राउ गरिएपनि कोरोनाका कारण हिरासतमा भने राखिएन । सार्वजनिक मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धान भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाले कसुर ठहर गर्दै १० हजार जरिवाना, १० हजार क्षतिपुर्तिको सजाय सुनाएको छ । ज्यान मार्ने उद्यो मुद्दा दर्ता भएको भए ब्रहमालाई सार्वजनिक अपराध भन्दा कडा सजाय हुनसक्थ्यो । ज्यान मार्ने उद्योग कसुर प्रमाणित भएको भए जेल सजायसमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
के भन्छन् ब्रहमा ?
दस्ताबेज डटकमको सम्पर्कमा ब्रहमाले घटना घटेको स्वीकारे । तर घटना हुनुको कारण निकै लामो कथा रहेको दाबी गरे । ‘आजको यो घटना होईन ०६७ सालदेखिको कुरा छ । जग्गाको झगडा थियो । बाँडफाँड र मुद्दामामिलको कुरा छ,’ उनले भने,‘कति वर्षसम्म किचकिच सहेर बस्ने । त्यो दिन आवेग आएर हानेको हुँ ।’ उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट आफूलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा सजाय भइसकेको बताए । ‘यो धेरै पुरानो कुरा हो । मलाई उहिले नै कारवाही र क्षतिपुर्ति तिर्ने फैसला भइसकेको छ,’ उनले भने ।
१० श्रावण २०७८, आईतवार ११:४८ प्रकाशित